You na-agba ndị na-agụ akwụkwọ gị ume ma ọ bụ na-akụda ha mmụọ? | Martech Zone
Tuzdee, Machị 20, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị a, m natara ozi-e sitere na ala. E nwere asọmpi na Gather to dee banyere otu onye nkuzi siri gbanwee ndụ gị.
Akwukwo blọgụ na nso nso a site n'aka Brian Clark nke CopyBlogger bụ mkpali m, 5 Grammatical Error That Make You Look Ogbi. Brian dere post ahụ karịa izu 2 gara aga, mana ọ na-ewute m kemgbe ahụ. M na-agbasi mbọ ike na ụtọ asụsụ na nsụgharị.
Banyere zoo: Ndi ọmọdiọn̄ọ andikpep emi akanamde ukpụhọde? Ala na Gather ga-achọ ịnụ akụkọ gị ka anyị wee soro ndị ọzọ kerịta ya ma mee ọmarịcha ọrụ ndị nkuzi na-arụ kwa ụbọchị. Ala ga - ahọrọ ndị ikpeazụ ga - anata Kaadị Onyinye $ 50 Border na otu onye nwere mmeri iji nweta $ 250 Border Card.
N'ụbọchị, m na-atụgharị uche n'ihe m gụrụ, mụta ma mezuo. Na ụgbọala m na-ala, ana m achịkọta echiche ndị ahụ n'isi m ma na-ahazi ha ka ha dee na blọọgụ m. Oge m ga-anọdụ ala ịde ihe, ọdịnaya adịla njikere ịgbawa. M na-edekarị na 'iyi nke nsụhọ'. Enweghị m ike pịnye ngwa ngwa… ya mere ahịrịokwu m na paragraf na-abụkarị ndị ọrụ na-awụlikwa elu.
Mgbe niile, ana m ahahie ụzọ ole ma ole. M na-azọpụta post dị ka a gbara. Agụrụ m akwụkwọ ahụ. M akaebe-gụọ usoro. M na-edozi mmejọ ma na-ebipụtaghachi ya ugboro ugboro. N'ikpeazụ, m na-ebipụta post… ma gosipụta ya ọzọ. Ọ bụ ezie na m na-elekọta nke ọma, m ga-ahapụ otu n'ime mmejọ ndị ahụ 'na-eme ka m daa ogbi'.
Mana ọ gaghị egbochim ide ihe. Ekweghị m ekwe.
Ihe omume Gather kpaliri m ide banyere onye nkuzi Bekee nke m nke asatọ, Oriakụ Rae-Kelly. Ọ bụrụ na ịnweghị nkeji ma ọ bụ abụọ iji gụọ post ahụ, m ga-ejupụta gị. N'oge ahụ na ndụ m, ejighị m onwe m n'aka ma na-achọ onye ga-enye m ihe kpatara iji nwee nnabata onwe m. .
Utu ke ndiwụk ntịn̄enyịn ke ndiọiwet uwet n̄kpọ, usem, ye usem mi, Mma Rae-Kelly ama odụn̄ọde utom mi man okụt se ifọnde utu ke idiọk. Site n’itinye uche m n’ihe ziri ezi, achọrọ m ịmụ ma rụpụta nnukwu ọrụ maka Oriakụ Rae-Kelly. M ga-enyocha ọrụ m maka mmejọ m mere n'oge gara aga ma gbalịsie ike ịghara ime ha ọzọ.
Oriakụ Rae-Kelly maara ka esi akpali ma wulite ugwu nke ụmụ akwụkwọ ya. Nke ahụ dị obere nye ndị nkuzi na ndị ndu n’oge a. Amaara m na Brian edeghị post ahụ iji 'mee ka m daa ogbi' mana ọ ga - ewute m. Olileanya m nye gị ndị na-eche maka ịde blọgụ ma ọ bụ ịde blọgụ bụ na isiokwu ndị dị ka nke a anaghị ada mbà.
IHE: Brian's blog bụ otu nke kasị mma na net. Ọ bụ ezigbo akụ ma nyeere m aka ịmeziwanye ederede m na nnomi ederede ederede. Ọ bụ blọọgụ obi ụtọ ma dịkwa mma na enweghị ike iji ya mee ihe ga - egbochi ndị edemede ... nke ọzọ abụghị eziokwu!
Enweghị m ike ikwu maka ndị na - ede blọgụ niile, mana m ga - agbaghara gị maka mmejọ gị ma nwee olile anya na ị ga - agbaghara m maka nke m. Anaghị m agụ blọgụ gị n'ihi na m na-achọ ịchọta njehie gị - m na-agụ ya n'ihi na m na-amụta n'aka gị ma ọ bụ na-enwe obi ụtọ na ederede gị. N'otu oge ahụ, enwere m olileanya na ị ga-ewepụta oge iji dejupụta ụdị ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na “Ọ dị m ka ogbi”. Agaghị m ewe iwe… otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ m ga-akọwara m ugboro atọ na email mgbe m dere ndụmọdụ kama ndụmọdụ (argh!).
Ekwenyere m na nkà asụsụ m na nsụpe na-akawanye mma. Aghọtara m na, maka ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ, mmejọ dịka ndị ahụ na-emebi ntụkwasị obi m na aha ọma m n'ihi ya ana m agbasi mbọ ike imezi ha. Olileanya, ị belata m ụfọdụ slack na-elekwasị anya na ozi na ọ bụghị mmejọ!
Ezigbo ndị nkuzi na-agbazi ụmụ akwụkwọ ha, nnukwu ụmụ akwụkwọ na-agba ha ume. Nwere ike dochie anya onye ndu, onye nkuzi, onye nchuaja, onye nne na nna ma o bu Blogger na ebe onye nkụzi ọ na-ejidekwa eziokwu.
Enwere m ike ide ya dị ka "ịhụnanya siri ike" Doug, mana n'ezie, iji "ogbi" n'isi okwu bụ naanị ịbawanye ikike na-adọta. O wee bụrụ na ọ bụ ọkwa kachasị ewu ewu m dere, nke ahụ jọgburu onwe ya.
Nwere olile anya na enweghi mmetụta siri ike. 🙂
Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m rewrote post a ka ọ ghara ịda n'ụzọ ahụ! Blog gi bu ezigbo ihe omuma na ihe nkwalite. Amaara m na ịgaghị ekwu ya n'ụzọ ahụ ma ọlị - enwere m mmetụta ọsọ ọsọ ebe ọ bụ na 'a na-ama m aka'. 🙂
Kama ịda mba, blọọgụ gị abụụrụ m nnukwu agbamume (echekwara m na ọtụtụ ndị ọzọ). Okwu a bu 'ogbi' rapaaram n'onye a ka m guru ya, o nweghi m ike iju ya.
Nakwa, achọpụtawo m ọtụtụ ihe ndị a (edenyere m aha ha) yana ọtụtụ ndị na-ekwu okwu na-ekwu hoo haa! Ozi gị ga - enyere ọtụtụ ndị aka (ọ nyeere m aka). Enwere m olileanya na ndị na-ekwu okwu anaghị egbochi onye ọ bụla ide ihe. Ọ na-achọ omume na ndidi n'onwe gị!
Daalụ nke ukwuu maka ịlele post! Daalụ maka agbamume niile.
Echere m na ọ bụ ezigbo ụzọ nke ichetara ndị mmadụ maka mmejọ ha. O doro anya na ọ na-ada ụda ikwu okwu ma ọ ga-abụrịrị ụzọ ndị mmadụ si elebara anya. N'ezie, ọ bụ ụzọ o si zie ihe.
Ekwere m, Howie. O nyeere m aka na ọ bụ ọkwa dị egwu. N'ụzọ na-emegide onwe m, enwere m olile anya na ọ 'anaghị akụda' ndị na-ede ederede dị ka nke ahụ. Isi okwu m abụghị ka m gbaa Brian (n'ezie m hụrụ blog ya n'anya). Ihe m kwuru bụ iji hụ na anyị gbara ibe anyị ume.
Achọghị m ka ndị mmadụ zere ịde blọgụ ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ide nke ọma. Ihe magburu onwe ya gbasara ịde blọgụ bụ na ndị mmadụ na-ede banyere ihe ha ma. Oge ụfọdụ ụtọasụsụ na nsụpe okwu anọghị n'ụdị ahụ… mana ihe ndị dịka mmepe, ịzụ ụmụ, okwukwe, wdg.
Daalụ maka ikwu gị!
Describe na-akọwa kpọmkwem ihe m chere mgbe m nwetara isiokwu ahụ iji tinye ya na blọọgụ m na-eche na furu efu n'uche m. Echere m na onye na-agụ blọgụ anaghị echebara ụtọasụsụ na nsụpe okwu, ihe dị mkpa bụ ọdịnaya ya.
Ihe dị mma gbasara ịde blọgụ bụ ịmụtakwu nka gị, dịka post site na post ị ga - enweta ahụmịhe ma chọpụta mmejọ gị, ọkachasị ndị na - esite na mba na - enweghị Bekee dịka asụsụ 1 dịka eg.
Ihe omuma gi bu ihe nlere anya kachasi nma - echeghm banyere ndi bekee nwere asusu bekee! Internetntanetị enweghị oke asụsụ ma anyị kwesịrị ịkwado ma nwee ekele maka ndị na-ede blọgụ anyị ka na-arụ ọrụ ịmara Bekee ma ọlị.
Daalụ maka ịza ajụjụ! Na nnukwu ọrụ na blog gị.
Ekwenyere m na ọdịnaya dị mkpa karịa mana anyị enweghị ike ịgbanahụ eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ na - eche banyere ihe ndị dere dere. Ma ọ bụ ikekwe, ha na-eche na inwe ike ide edemede dị ka ihe pụtara na ị bụ ezigbo onye edemede. Na site na nke ahụ, ezipepe okwu na ụtọ asụsụ.
Mgbe ọ bụ ihe gbasara blọọgụ na isiokwu, ụtọasụsụ
njehie * na-eme * na-eme ka ị dị ka ogbi n’ihi na ihe ọ pụtara
na-agbagha! (dị ka ndụmọdụ ndụmọdụ ndụmọdụ VS gị)
Mana m na-elekarị ọdịnaya anya… nke bụ
siri ike n'ihi na echere m onwe m dị ka onye nyocha
n'agbanyeghị na anaghị m gbaara 🙂
Ọ bụ ụwa dị iche ma a bịa n’ihe ndị mmadụ
kwụọ ụgwọ! Ọ bụrụ na ọ bụ free ọdịnaya, meh, ụtọ asụsụ na
nsupehie juru ebe niile.
Emela onwe gi ihe ojoo =) Onweghi onye zuru oke (ee e
otu ga-abụ :))